ဆရာမလေးမကြည်ပြာ – Grab Love Story
ဆရာမ နာမည်က ကြည်ပြာ..ကျတော့တို့ရွာကို လာပြီး မူလတန်းကိုလာရောက်စာသင်ပေးသော..ရပ်ရွာခန့်..ဆရာမ.တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကျတော့အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ နေထိုင်ရန် ရပ်ရွာက သတ်မှတ်ထားပါသည်။ဆရာမကြည်ပြာက. အသားကဖြူဖြူ…အရပ်ကနဲနဲပုတယ်…ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးခွက်ပြီး ..သွားလေးတွေက ဖြူဖွေးနေတာပဲ…ဆရာမဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ရင်..အရမ်းကို ကျက်သရေရှိ လှပတဲ့သူပါ…လှမ်းလျှောက်ရင်လည်း..ညင်ညင်သာသာလေး လှမ်းလျှောက်တက်ပြီး…ဘေးတိုက်တုန်ခါတဲ့..တင်သားများမဟုတ်ဘဲ…အပေါ်အောက်..လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်။သူနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးပေမယ့်လည်း…ကျတော့အတွက်မှန်းထုစရာ..စိတ်ကူးရင် မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါသည်။.မှန်းထုစရာ အကြောင်းအရာတွေကလည်းရှိတယ်လေ…မိုးလင်းလို့ သေးပေါက်ရင် အိမ်သာပေါ်မတက်ပဲ…အိမ်သာရှေ့မှာ..ထမိန်လှန်သေးပေါက်ခြင်း။
ရေချိုးရင် သူနေတဲ့အိမ်ခြေရင်းမှာ ချိုးတက်ခြင်း၊ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးပြန်လာရင် ရေချိုးတဲ့နေရာလေးမှာပဲ…ထမီလှန် ဓာတ်မီးထိုးသေးပေါက်ခြင်းတို့ဟာ..ကျတော့အတွက် ဆရာမကိုမှန်း…. ဂွင်းထုခြင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့…..အဲဒီအထဲကမှ..ကျတော်…ဂွင်းထုအရသာအရှိဆုံးက။မနက်ရေချိုးချိန်နှင့်ညနေရေချိုးချိန်ပဲ…ဆရာမကြည်ပြာ ရေတခါချိုးလျှင်အချိန်တော်တော်ကြာတယ်..နှံစပ်အောင်လည်းတစ်ကိုယ်လုံးပွတ် ချေးတွန်းတယ်….ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးတဲ့နေရာက ကျတော့အခန်းရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်…သူနေတဲ့အိမ်ရဲ့ခြေရင်းဘက်ကျတာပေါ့….တောရွာတွေဆိုတော့..ရေချိုးခန်းအကာတွေ..ဘာတွေ..မရှိဘူး..ရာဝင်အိုးနှင့်အဝတ်လျှော်စရာသစ်သားတစ်တုံးပဲရှိတယ်..ကျတော်ကဆင်းရဲတော့ ..ဝါးထရံကာအိမ်လေးနဲ့ပဲနေနိုင်ပါတယ်…ချောင်းကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်တော့ပြေတယ်…ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးမယ်..မြင်လိုက်တာနဲ့..ကျတော်အခန်းထဲပြေးဝင်တော့တာပဲ…။
ဆရာမရေချိုးရင်…ထမီအပိုတထည်ကို ဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ်တင်..ညာလက်ကဆပ်ပြာခြင်းကိုကိုင်ပြီး..ရေချိုးတဲ့နေရာကိုလာတယ်… ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့..ရေချိုးတာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်…ကဗျာကသီ အိမ်ခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်ပြီး..ချောင်းနေကျအပေါက်မှာနေရာယူလိုက်တယ်…ဆရာမကလည်း….ရာဝင်အိုးနားရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..ထမီကိုတန်းမှာတင်..ဆပ်ပြာခွက်.အောက်ချပြီး…ရေ လေးငါးခွက် ခေါင်းပေါ်ကနေဆက်တိုက်လောင်းချလိုက်တယ်..လျောကျနေတဲ့ထမီကို ပြန်ပြင်ဝတ်ပြီး နောက်ထပ်ရေလောင်းလိုက်တယ်..ပြီးတော့..မျက်နှာသစ်ဆေးရည်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်ပြီးမှသွားပွတ်တံပေါ်သွားတိုက်ဆေးကိုကုန်းပြီးညစ်နေတာလုပ်လိုက်တော့ တင်းပြီးကားထွက်နေတဲ့တင်ပါးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့. ကျတော့ငပဲက မရတော့ဖူး..ငေါက်ကနဲ့ဆို..ထောင်လာတော့တာပဲ…ဆက်ကြည့်နေတုန်း…ဆရာမက သွားတိုက်နေတာများ..။
အိုး..ရေစိုထမီကပ်နေတဲ့ တင်စိုင်ကြီးများက..လှုပ်ရမ်းနေတာပဲ….မနောသီချင်းတောင် သွားသတိရလိုက်သေးတယ်..ဘာတဲ့.”.အိုးလေးလှုပ်လိုက်ပါ” ဆိုတဲ့အတိုင်း…ရမ်းခါနေတာပဲ…ကျတော့လက်ကလည်းမရတော့ဖူး..လီးကိုပုဆိုးပေါ်မှကိုင်ပွတ်နေရပြီ…သွားတိုက်ပြီးတော့..ပလုတ်ကျင်းလိုက်..ကုန်းပြီးထွေးထုတ်လိုက်လုပ်နေတာများ..ကျတော့စိတ်ထဲမှာ ဆရာမက..ကုန်းပြီးကျတော့လီးကိုဆောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရောင်လာတော့ လီး ပိုတောင်လာတယ်…မရတော့ဘူး..ပုဆိုကိုဖြည်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်..လုပ်နေရပြီ..ပလုတ်ကျင်းပြီးသွားတော့..ရေထပ်လောင်း..ကျတော့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်…ထမီကိုခြုံတဲ့ပုံစံနဲ့..ဂျိုင်းတွေပွတ်..နို့တွေပွတ်..ဘယ်ညာချိန်းပြီး ထမီကိုကိုင်ရင်..ဝင်းမွတ်နေတဲ့.ရင်သားလေးတွေကို မြင်မြင်ရတယ်..ကျတော့လက်ကလည်းမြန်လာပြီ..အဲဒီအချိန်မှာပဲ..ထမီကိုရင်ရှားလုပ်ပြီး အဖုတ်နေရာကိုစိတ်ပြေနပြေ. ပွတ်နေတာများ….အိုး.ဆရာမရယ်…။
ကျတော့စိတ်တွေမရတော့ဖူး…ဆရာမ..အဖုတ်အရမ်းယားလို့. ပွတ်နေတဲ့ပုံစံမြင်ယောင်လာပြီး..အိုး..ဆရာမ…..အိုး..အား.အား..ကျတော့လိုးပေးနော်….ဆရာမ..ဆရာမ…မပူနဲ့နော်…..လိုးမယ်နော်…အိုး..အားး..အရမ်းယားနေလား.ဟင်…လိုးပေးမယ်နော်….ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်…အိုးဆရာမ…ဆရာမ..ဆရာမ…အ..အ..အ”ဆိုပြီးကျတော့ လီးရည်တွေ..ပန်းထွက်သွားပါတော့တယ်…ကျတော်..ပြီးသွားတော့..တုံးလုံးလှဲလိုက်တယ်..ဆရာမရေချိုးတာဆက်မချောင်းဖြစ်ပေမယ့်..ခဏအကြာ..ရေချိုးသံမကြားရတော့..ဆရာမလည်း..ရေချိုးပြီးသွားတာပဲဖြစ်မှာပါ…. “ဒေါ်ကြည်..အကူအညီခေါ်တာ..ဘာလုပ်မလို့ဗျ..အေး.ဟေ့..အဖေတို့အလှူကို မုန့်ကျွေးပေးမလို့..ဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့ခေါ်လိုက်တာ..””ဪ..ဒါများ..ရပါတယ်ဗျ…ကဲ..ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြော”..”အဲဒီမှာ..ဆရာမကို..ကူလုပ်ပေးလိုက်..”ဟုတ်ကဲ့.ဒေါ်ကြည်”..”ဆရာမ ကျတော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..”။
ဒါလေး မွှေပေး..ကျမ ခဏ နားလိုက်ဦးမယ် ဆိုပြီး..မြေပြင်မှာပဲ ဖင်ထိုင်ချလိုက်တယ်..ပြီးတော့..အကျီ င်္လေးကိုဟပြီးယပ်ခတ်နေတယ်….ဆရာမကို ခုမှသေချာတွေ့ဖူးတာဆိုတော့…သေချာကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်နေမိတယ်..မျက်နှာလေးက ဖြူဖွေးသန့်စင်ပြီး.သွေးကြော စိမ်းစိမ်းလေး အထင်သားမြင်နေရတယ်….လည်တိုင်လေးကလည်း..ကျော့ရှင်းနေတာပဲ… ကြယ်သီးတစ်လုံးဟပြီး ယပ်ခတ်နေတဲ့အတွက်..နို့အုံလေးကလည်း..ဖြူဥနေတာပဲ…ဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးက အောက်ဖက်ကို ရောက်သွားတော့..လုံးတစ်နေတဲ့ပေါင်သားရယ်..ဖြူဖွေးနေတဲ့ ခြေသလုံးသားတွေမြင်ပြီး လူက ငစမာန်ထချင်လာနေပြီ….အဲလိုကြည့်နေတုန်းပဲ.ဆရာမက မော့အကြည့်နဲ့..ကျတော်ကြည့်တာသိသွားပါလေရော…ကျတော်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းငုံ့ ဆက်မွှေနေလိုက်တယ်….ခဏနေတော့ ..”ရပြီ..ရပြီ..မင်းမင်းက..အိုးကိုမထား..မမက ယက်ချပေးမယ်..”အလဲ..ကျတော့နာမည်တောင် သိလို့ပါလားပေါ့…။
ကျေနပ်သလိုခံစားမိလိုက်တယ်…ကျတော်က အိုးကိုမ…ဆရာမက..ကျတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ ..ကုန်းပြီးယက်ချနေတော့..ဟနေတဲ့ လည်ပင်းက အရမ်းကို ဟသွားပြီး…ထမီထပ်ဆင့်ထိ..တောက်လျောက်မြင်နေရတယ်ဗျာ..အဖြူရောင်ဘော်လီက..နို့တွေရုန်းထွက်နေသလို..တင်းနေတာပဲ…မလည်းမ..ကြည့်လည်းကြည့်နဲ့..ငပဲကတော့..”ဇ”ပြလာပြီလေ..ဆရာမကလည်း ပြချင်လို့လားမသိဖူး..ဖြည်းဖြည်းချင်းယက်ချနေတယ်…ပြီးသွားတော့ ရွှေကြည်(၃)ဗန်းရတယ်. “”အိုးကို အဲဒီမှာပဲ ခဏချ…ဗန်းတွေ.အိမ်ပေါ်တင်ရအောင်”ဆိုပြီး..ဗန်း(၁)ဗန်းမပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်ထွက်သွားတယ်..ဗန်း(၁)ဗန်းမပြီး..ထပ်ချက်မကွာလိုက်တာပေါ့…အို..ကြည့်စမ်းပါဦးဗျ…တင်တဖက်နဲ့တဖက်က. မျက်စပစ် ခေါ်သွားသလိုပဲဗျာ..တုန်.တုန်..တုတ်တတုန်..တုံတုံ..ခါ..ခါ.ခါ..တုံခါကြီးပေါ့..အိမ်ပေါ်လည်းရောက်..ဗြုန်းဆို…ဗန်းကိုကုန်းချလိုက်တော့..စိတ်ထဲက.”ဟာ…သွားပြီ..”သူ့ဖင်နဲ့ ငါ့လီးတိုက်ပြီ..။
”တော်သေးတယ်.. ဘာမှမပြောဘူး…”နောက်တစ်ဗန်း ကျတော်ပဲ..မ..လာခဲ့မယ်””.. ဪ..အေး..အေး” “ဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ..ဆရာမ” ”ဒီမှာတော့..ပြီးပြီ..ဒေါ်ကြည်ကို..မေးလိုက်ဦး”.. “”ဒေါ်ကြည်ရေ့..ဒီမှာပြီးပြီ..ဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ””’လုပ်စရာတော့.မရှိတော့ဘူး….ဪ.ဒါနဲ့..ငါတို့ကတစ်ပတ်လောက် ကြာမှာဆိုတော့..ဆရာမ လိုအပ်တာရှိရင်..လုပ်ပေးလိုက်ပါဦး”.”ဟုတ်ကဲ့..ဒေါ်ကြည်..ကျတော်ပြန်တော့မယ်နော်..””အေး..အေး..ကျေးဇူးပဲ”.. အိမ်ရောက်တော့…ခုနက ဆရာမ တန်ဆာပလာတွေ ပြန်မြင်ယောင်ပြီး.တစ်ချီလှုပ်ရှားသေးတယ်.. “”မင်းမင်းရေ.မင်းမင်း””ဗျ..”ဘာတွေလုပ်နေတုန်း”မလုပ်ပါဖူးဆရာမ..ဘာခိုင်းမလို့လဲပြောလေ..”ခိုင်းစရာမရှိပါဖူး..ပျင်းလို့..အားရင်လာခဲ့ပါလား..”ဟုတ်..ဆရာမ.လာပြီ”..”ရော့..ကော်ဖီသောက်..”ဟုတ်””မင်းမင်းက..ရည်းစားမရှိဘူးလား..”ဆရာမရယ်..ဘယ်သူကကြိုက်မှာလဲ..”။
ကြိုက်မှာပါ..မင်းမင်းက ခန့်ချောပဲဟာကို”..”ဆရာမကတော့…မြှောက်နေပြီ..ဟိ..ကျွေးစရာ..မရှိဘူးနော်”..”ရပါတယ်..မင်းမင်းရယ်..”ကျတော့သာ ပြောနေတာ..ဆရာမရော..မရှိဖူးလား”..ရှိတာပေါ့..စာမေးပွဲပြီးလို့ပြန်ရင်..လက်ထပ်မှာလေ..”ဪ..ဟုတ်လား..”ဆရာမပျော်နေတာပေါ့..”..ပျော်တယ်တော့..မဟုတ်ပါဘူး..သူ့မိဘ..ကိုယ့်မိဘ..သဘောတူတာလေ..ငယ်သူငယ်ချင်း.သံယောဇဉ်တော့ရှိပါတယ်..”ဆရာမတို့တခါမှမတွေ့ဖူးလား”..တွေ့ဖြစ်ပါတယ်..”တွေ့တော့..ဆရာမတို့..ဘာလုပ်လဲ..ဟင်”..ဟဲ့..ပြောစရာလား..”ဆရာမကလည်း.ရှက်နေသေးတယ်..သိချင်လို့ပါ…ပါးလေးတော့..နမ်းမှာပေါ့..ပြီးတော့…””ကောင်လေးနော်..ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ”..ဆိုပြီး..အရမ်းရှက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့..မျက်နှာလေးကို..ရဲနေတာပဲ..ကျတော်လျောက်မေးနေတော့..ဆရာမ..ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းတွေ..ဖြစ်နေတယ်..ဘာစကားမှပြန်မပြောပဲ..လက်နှစ်ဖက်ကို..ပွတ်နေတယ်..။
ပြီးခါမှ..”မင်းမင်း..ခဏနေဦးနော်…ဆရာမ..ပန်းသီးသွားခွဲလိုက်မယ်..မင်းမင်းစားဖို့”ဆိုပြီး နောက်ဖေးဘက် ထွက်သွားတယ်..တအောက်ကြာတော့..”အ”. ဆို ဆရာမအသံထွက်လာတာနဲ့…နောက်ဖေးကို..ကဗျာကယာ.လိုက်သွားလိုက်တော့..ဆရာမလက်မှာ..သွေးတွေ.ထွက်နေတယ်..”ဆရာမ ဘာဖြစ်တာလဲ..လက်ညိုးမှာလည်း.သွေးတွေနဲ့..””ပန်းသီးအခွံခွာတာ..ဓားချော်ပြီးရှသွားတာ..”ပြစမ်း.ဆိုပြီး..”လက်ညိုးလေးကို..ကိုင်လိုက်တာ..ချောမွတ်နေတာပဲ..ကျတော်လည်း..မပြောမဆို..ဆရာမ..လက်ညိုးလေးကို..ယူပြီး..သွေးတိတ်အောင်..ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေး”..ဆရာမက.ခေါင်းလေးငုံပြီး..အသံတိတ်နေတယ်…ဆရာမမျက်နှာလေးကို..ကြည့်ပြီး..ကျတော့စိတ်တွေ..ယောက်ယက်ခက်လာတယ်..ငပဲကလည်း..မနေတော့ဘူး…ထိုးထောင်လာပြီ..မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး..ဆရာမကို..ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်တော့..”အို့”ဆိုပြီး.ပါလာတယ်…”ဆရာမရယ်…အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ…။
ကျတော်..ဆရာမကို….ချစ်တယ်ဗျာ..””မင်းမင်းရယ်..မ”ကျတော်ဆရာမစကားအဆုံးထိမစောင့်ပဲ..ဆရာမနှုတ်ခမ်းတွေကို..စုပ်လိုက်တယ်..ပထမတော့..တွန်းထားသေးတယ်…အချိန်ကြာကြာစုပ်လိုက်တော့..တွန်းအားတော့..လျော့ပြီး..ငြိမ်နေတော့တယ်..ဘယ်လက်က..တင်သားတွေကိုပွတ်…ညာလက်က..နို့အုံကို..ကလိပေးလိုက်တယ်..ညာလက်ကတဖြည်းဖြည်းအောက်လျောဆင်းလာပြီး.ဗိုက်သားလေးကိုပွတ်..ပြီးတော့..ဆရာမစောက်ဖုတ်နေရာကို..ဖမ်းဆုပ်ပြီး..လက်ချောင်းတွေနဲ့ အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲ..နဲ့..ဆရာမခဗျာမှာတော့”ဟင်း!!!အင်းး..အီး…အား..ကျွတ်..ကျွတ်”နဲ့..အဖျားတက်နေသလိုပဲ..”မင်းမင်းရယ်..အခန်းထဲသွားရအောင်နော်”တဲ့..အခန်းထဲရောက်တော့..ကုတင်မှာ.. ခြေတွဲလောင်းထိုင်..ဘယ်လက်က ဆရာမကိုဖတ်.ညာလက်ကနို့အုံကိုပွတ်..နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်..လျှာလေးနဲ့ ကလိနဲ့.အလုပ်ဖြစ်နေတယ်..ကြယ်သီးတွေဖြုတ်တော့..ဝိုင်ဖြုတ်ပေးတယ်။
နို့တွေဘော်လီပေါ်က အုပ်ကိုင်နေတုန်း.ဆရာမက. ဘော်လီကြယ်သီးတွေဖြုတ်ပေတယ်..အိုးဗျာ..ဝင်းမွတ်နေတာပဲ..နိုးသီးလေးတွေများ..မညိုပဲ..ပန်းရောင်သမ်းနေတယ်..ဘယ်ရမလဲ.နိုးသီးလေးကိုကုန်းစုပ်ပြီး..ညာလက်က..ထမီကိုဖြည်ပြီး..နှိုက်တာ.အတွင်းခံမှာ.စိုနေပြီ..အထဲလက်လျို..စောက်ဖုတ်ကြီးကို.ကိုင်..အထက်အောက်ပွတ်.””.အိုး..အင်း..ဟီး…အီး…အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်”နဲ့.ဆရာမလည်း.အရမ်းဟော့နေတော့တယ်..လူခြင်းခွာပြီး..ဆရာမအကျီ င်္..ထမီ..အတွင်းခံတွေ. ချွတ်ပေးလိုက်သလို..ကျတော်လည်းအကုန်ချွတ်ပလိုက်တယ်..ပြီးမှ..ဆရာမကို..ကုတင်မှာလှဲလိုက်ပြီး..ခြေနှစ်ချောင်းကို ကားထောင်လိုက်တယ်..မို့တက်လာတဲ့..စောက်ပတ်ကိုမြင်တော့..ပါးစပ်က အလိုလိုရောက်သွားပြီ..ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ..လွေးတော့တာပေါ့..”အိုး..အိုး..ဟင်း..ဟင်းကျွတ်..ကျွတ်..အမလေး..အား..အား!!!!မင်းမင်း… မင်းမင်း..ဟင်းးးဟင်းး..မရတော့ဘူး..အား..အား.ရင်ထဲတမျိုးပဲကွယ်…နေရတာကြီးကို။
အိုး..အိုး..ထွက်ပြီး..ထွက်ပြီ..အား..အ..အားအ’ နဲ့..ဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ကျတော့မျက်နှာပေါ်..စောက်ရည်တွေစင်ကုန်တယ်…”မင်းမင်းရယ်..ကန်တော့..ကန်တော့..”ရပါတယ်ဆရာမရယ်…ကျတော်ဆရာမကို..လိုးတော့မယ်နော်””..ပြောစရာလိုသေးလို့လား..မင်းမင်ရယ်”မတ်တတ်ကောက်ရပ်ပြီး..ဆရာမ..အဖုတ်မှာတော့..လီးထိုးထည့်တော့..”’အ”..ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်..မင်းမင်း..ဆရာမ..တခါမှအလိုးခံဖူးတာ..မဟုတ်ဖူး”..ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဗျ…ကျတော်လီးထည့်တာ..မဝင်ပဲ..တစ်နေတယ်…ဒါနဲ့..အားစိုက်ပြီးဆောင့်လိုက်တော့.”ဖောက်.”အမလေး..သေပါပြီ..အမေရဲ့..”အား.းအား..ဟင်း..ဟင်းနာတယ်..နာတယ်..”ဆိုတော့..သာလေးငြိမ်နေလိုက်တယ်..ခဏကြာဆွဲထုတ်တော့..လီးမှာသွေးတွေပေနေပြီ.”.ဪ..ဆရာမက အပျိုစစ်သားပဲ”လို့..စိတ်ထဲပြောမိလိုက်..ဒီလိုနဲ့..သွင်းလိုက်.ထုတ်လိုက်..လုပ်လိုက်တော့..”ရပြီး.မင်းမင်း..ဆောင့်တော့”ပြောတာနဲ့..။
မင်းမင်းတို့ဆောင့်ပြီလေ…ဒုတ်..အင့်..အင့်..အအအ..ကောင်းတယ်..မင်းမင်း”တင်ပါးတွေ ကော့ကော့ခံလာတယ်..ကျတော်လည်း..အချက်၂၀ လောက်ဆောင့်လိုက်ပြီး..ရပ်လိုက်တော့.”.အို..မင်းမင်းရယ်..ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ”..ဆရာမ..ဖင်ကိုကြည့်ပြီး..လိုးချင်လို့ပါ..”မင်းမင်းရယ်..ခုတော့..ဒီလိုပဲ.လိုးပါ..နောက်နေ့ကျ..မင်းမင်း..စိတ်တိုင်းကျလိုးနော်””ဟုတ်ကဲ့..ဆရာမဆိုပြီး..”ဆရာမရယ်..လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ..တအားဆောင့်မယ်နော်…ဆရာမစောက်ဖုတ်ကြီးက..ကျတော့လီးကို..ညစ်ထားသလို…အရမ်းကိုစီးပိုင်နေတာ..”အေးပါ…လိုးပေးပါ..”ဟင်း..ဟင်း..အား..အီး…..အား..အား.လိုးလိုး..နာနာလိုး..အမလေး..ကောင်းတယ်..ဟင်းဟင်း..ကျွတ်ကျွတ်..အိုးအိုး..မင်းမင်း…မင်းမင်း..မ..ပြီးတော့မယ်..ပြီးတော့မယ်..ဆောင့်..ဆောင်..့အား…အာ…အအ..အင်း..အီး…”ကျတော်လည်း..ပြီးတော့..မယ်….လိုးလိုးကောင်းလိုက်တာ….အား..အား…မ..လရည်တွေ..မစောက်ပတ်ထဲ..ထည့်လိုက်မယ်နော်။
ထည့်ထည့်..မင်းမငး..အား..အား..အိုးအိုး..ထည့်….ဘုတ်..ဘုတ်..ဒုတ်…ထည့်ပြီမ..အားအားအား..”ဆိုပြီး.ကျတော်လည်း..ဆရာမကိုယ်ပေါ်မှောက်..ကျသွားတော့တယ်..”မင်းမင်း..ထတော့လေ..မ.လေးနေပြီ.ဟုတ်..မ”…”မမက..အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ..တော်ပါ..ဟုတ်ဘဲနဲ့..”တကယ်ပါမရဲ့..ခုတောင်.ထပ်ချစ်ချင်နေပြီ.” “တော်ပါတော့..မင်းမင်းရယ်..မ.စောက်ဖုတ်က.ကျိန်းနေပြီ..နောက်နေ့တွေမှ..မင်းမင်းသဘောရှိ.”..”တကယ်နော်..နေါက်နေ့တွေကျရင်..မ..ကိုဖင်ပါလိုးမှာနော်”…”အေးပါ..အေးပါ..ခုပြန်တော့နော်..””ဟုတ်”.ဆိုပြီး..ကျတော်လည်းပြန်လာခဲ့တယ်….အိမ်ရောက်တော့..အမေကတန်းပြီး..”ဟဲ့..မင်းမင်း..နင်ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေတာလဲ..”ဘယ်မှမသွားပါဘူး..အမေရာ..ခေါင်းရင်း.အိမ်မှာပါ..ဆရာမပျင်းတယ်ဆိုတာနဲ့..စကားထိုင်ပြောနေကြတာ”..”မသိပါဘူး..နိုင်ငံခြား..ထွက်သွားသလားလို့..မကြည်အဖေ အလှူ..သွားဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ဦး..မကောင်းဖူး”။
ဟုတ်အမေ..သားနက်ဖြန်..သွားလိုက်မယ်.. မနက်ကျတော့..ဆရာမဆီသွား..နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးပြီး..ဧည့်ခံမနေပဲ ပြန်လာမယ်”ပြောပြီး..ခရီးထွက်ခဲ့တယ်… အလှူမှာ ညအိပ် အလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်နဲ့.အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ်..ဒေါ်ကြည်ကိုလည်း..ဧည့်ခံနေ့မနေတော့ဖူး..ကြိုပြန်နှင့်မယ်ပြော…ဒေါကြည်ကလည်း..ဆရာမ.အဆင်ပြေရဲ့လား…တို့လည်းဧည့်ခံညထိအိပ်ပြီး..နောက်နေ့မှပြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..ပြောပြီး..ဧည့်ခံမနက်ပြန်လာခဲ့တယ်..အိမ်မှာခဏနားပြီး..ဆရာမဆီ..တန်းသွားတော့တာပဲ…”ဆရာမရယ်..လွမ်းလိုက်တာ…”..”တူတူပါပဲမင်းမင်းရယ်”တဲ့.အပြန်အလှန်..အနမ်းတွေပေးပြီး.အလွမ်းဖြေကြတာပေါ့.. “”ညကျရင်..လာခဲ့မယ်နော်..ဒေါ်ကြည့်တို့က.နက်ဖြန်..ပြန်လာမယ်တဲ့”..ဆရာမကလည်း..ဒေါ်ကြည်တို့လာရင်..ပြန်တော့မှာဆိုတော့..ညကျရင်..အားလုံးအတိုးချ …ချစ်ကြမယ်နော်.”..”အင်းပါ..အရမ်းပိုတယ်နော်” “မပိုပါဘူး..လိုတောင်လိုသေးတယ်.တာ့တာနော်..မ”။
ဆိုပြီး..ပြန်လာခဲ့တယ်….”မ..မ..”..”လာလေ..မောင်..”. “မောင့်ကိုမျှော်နေတာ…”မောင်လည်း..အရမ်းလာချင်နေတာ..အမေတို့အိပ်တဲ့အထိ..စောင့်နေရလို.”..လာပါ..မရယ်..အခန်းထဲသွားရအောင်” အခန်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..နို့ကို.အားနဲ့.ညစ်လိုက်တာ..”အ”…”မောင်ကလည်း..အရမ်းပဲ.””ချစ်ချင်နေတာကိုဗျ..မ..ဘော်လီမဝတ်ထားဖူးလား..အတွင်းခံရော…မဝတ်ထားဖူးလား…” ”မဝတ်ထားဖူးလေ..မောင်လာရင်..ချွတ်မှာပဲဟာကို”..”ပိုချစ်သွာပြီ”..ခု..အကုန်ချွတ်လိုက်နော်မ.” အချိန်ဆွဲမနေပဲ..ပါးလေးကိုနမ်း..နားရွက်နမ်း..လည်တိုင်နမ်း..နှုတ်ခမ်းစုပ်ပြီး..နို့သီးခေါင်းတွေကို နှစ်ဖက်စလုံးချေပေးနေတယ်….မလည်း…”တဟင်းဟင်း..”ဖြစ်နေပြီ…ကုတင်ပေါ်အသာလေးလှဲပြီး.နို့တဖက်ကိုစုပ်..တဖက်ကိုချေ..ပြီး..လက်တဖက်က..ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေကို..ပွတ်ပေးနေတယ်..နို့စို့ရာကနေ..ဝမ်းဗိုက်ကို..လျှာနဲ့ယက်..ချက်တိုင်လေးကို..လျှာနဲ့ထိုးမွှေ..လုပ်တော့..။
ဆရာမတွန့်လိမ်နေပြီလေ..အောက်ကို..ထပ်ဆင်းသွားပြီး..ဆီးခုံလေးကိုနမ်း…အဖုတ်ပတ်လည်နမ်း..ပေါင်နဲ့အဖုတ်ကြားနမ်းနဲ့..ဆရာမက ကျတော့ခေါင်းကိုင်ပြီး..သူအဖုတ်ဆီ..ပို့နေတယ်..ဆရာမ..အနမ်းခံချင်နေပြီဆို..ပေါ်လွင်နေပြီလေ..ကျတော်လည်း..သူတည့်ပေးသည့်အတိုင်း..စနမ်းပါတော့တယ်…စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..စုပ်လိုက်နဲ့လုပ်နေတာ..”’အိုး..အိုး..အင်းအင်း..ဟဟ..ကျွတ်.ကျွတ်..မောင်ရယ်..ဟင်းဟင်း…”ညီးသံတွေထွက်နေတုန်း..လျှာကို အပြားလိုက်..ဆရာမစောက်ပတ်ကို..အထက်အောက်..ယက်ပေးလိုက်..စောက်စိကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..တခါတခါ..စောက်စိကို စုပ်လိုက်နဲ့..ဆရာမခဗျာ..”’တအင်းအင်း…တအားအား”နဲ့.လိမ်ကောက်နေတာပဲ..ကျတော်လည်း..ဆရာမစောက်ပတ်ကို..နမ်းတာ..မရပ်သေးပဲ..တင်ပါးကိုမလိုက်ပြီး..စအိုကနေ..စောက်ပတ်ကြာလေးကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တယ်။
ဟင်း.ဟင်း..အားအား..အိုးအိုး..ကျွတ်ကျွတ်..မောင်ရယ်..မနေတက်တော့ဘူး….မောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွာ…အား..အ.ား. မ..ကိုလုပ်ပေးတော့..မ..အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီ..လိုးပေးပါတော့…အီး..အီး..အား.အား..ကောင်လိုက်တာ..မောင်ရယ်…တော်ပါတော့..အဟင့်..ဟင့်..ဟင့်..အ..အ…ယားတယ်…ယားတယ်..အဟင့်. ဒုက္ခပါပဲ….အဟင့်…ထွက်ကုန်ပြီ..ဟင့်..အဟင့်.” ဆရာမက..ကျတော့မျက်နှာမှာစောက်ရည်တွေ.ပေမှာစိုး၍ဆွဲဖယ်ပေမယ့်..အပြစ်လိုက်..အခဲလိုက်..စောက်ရည်တွေကို..လျှာနဲ့သိမ်း..မြိုချပြလိုက်ပါတယ်…”ကွယ်..ဒီလောက်မလုပ်ပါနဲ့..မောင်ရယ်…မ.ကို.လိုးပေးပါတော့နော်..””မောင်းလိုးတော့မယ်နော်..မ”..”အင်း”မတ်တက်ရပ်လိုက်ပြီ…စောက်စိထိပ်ကို..လီးထိပ်နဲ့သုံးခါလောက်ကလော်ထိုးပြီး..စောက်ပတ်ဝမှာ.တေ့ကာ..ထိုးထည့်လိုက်တာ..”ဗြစ်..ဗြစ်..အား..အီး..အဟင့်ဟင့်..အီး.ပြွတ်..ဘွတ်..”အသံတွေ အရမ်းမည်တာပဲမောင်ရယ်.”’ဒီလောက်တော့မည်တာပေါ့..မရဲ့..သဘာဝပဲဟာ..”။
အချက်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ဆောင့်လိုးပြီးတော့..လီးထုတ်လိုက်ပြီး”” မ..ဖင်ကုန်းပေး..””အင်း”..မဖင်ကုန်းတာနဲ့..ခါးကိုကိုင်..အားနဲ့ဆောင့်လိုး..ထည့်လိုက်တယ်..”အား…အားအား.” ကျတော်ဆောင့်လိုးနေတုန်း..စအိုလေးကိုလည်း..ကလိပေးနေတယ်…ခဏကြာတော့..မ စောက်ရည်ပေနေတဲ့..လီးနဲ့..စအိုကို.တည့်ပြီးထိုးလိုက်တာ..”အား..နာတယ်..နာတယ်..အ..”ပြီးရင်မနာတော့ပါဘူး..မရယ်”ဆိုပြီး..ဆက်ဆောင့်နေလိုက်တယ်…”.အား…အမလေး..အားအား…ဆောင့်…ဆောင့်..ကောင်းလာပြီ…အိုး..အိုး..မောင်ရယ်..ဖင်ထဲတော့..မပြီးနဲ့နော်…မ.လေ..မောင်ရင်သွေးလိုချင်လို့ပါနော်…အား..အင်း..ကျွတ်..အား..အမလေးးး”မ.အသံတွေကို.ကျတော့ကို..အမြန်ပြီးအောင်လှုပ်ဆော်နေသလိုပဲ…ကျတော်လည်း..အရမ်းကောင်းနေပြီ….လီးကို..ဖင်ထဲကချွတ်ပြီး..စောက်ပတ်ကို..ပြောင်းလိုးလိုက်တယ်…ကျတော်လည်းပြီးချင်နေပြီလေ..မောင်ရယ်..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အသည်းကိုခိုက်နေတာပဲ…”ကျတော့လီးက သန်မာသည်ထက်..သန်မာလာသည်..မ.ရဲ့စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများကလည်း..ဖိသိပ်ကြပ်သိပ်စွာဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတော့..မအောင့်နိုင်တော့ပဲ..သုတ်ရည်များကို..မ..စောက်ခေါင်းထဲ..ပန်းထည့်လိုက်ပါလေတော့သည်…..ပြီးပါပြီ။